Mogadishu Journal » Shir Soomaaliya ay qeyb ka tahay oo ka furmay Koonfur Africa
Shir Soomaaliya ay qeyb ka tahay oo ka furmay Koonfur Africa
Mjournal :-Kulanka furitaankiisa waxaa marti ku ahaa Madaxweyne Sahraawi, Gudgoomiyaha Baarlamaanka ee dalka Chad, Wefdi ka socda Soomaaliya Wasiirka Arrimaha dibadda ee dalka South Afrika iyo marti sharaf kale oo ka kala socday Hay’ado iyo dowlado kale oo caalami ah.
Inta uusan kulanka furmin ayaa waxaa xarunta kulanka lagu dhaariyay xillibaanada cusub ee ka mid noqonaya xubnaha Baarlamaanka Afrika, waxaana ka mid ahaa afar xilldhibaan oo ka socday golaha Shacabka Soomaaliyeed, kuwaasi oo Baarlamaanka Afrika ku matalaya Soomaaliya.
Xildhibaanada la dhaariyay ayaa markii uu kulanka furitaanka soo dhamaaday waxaa ay la hadleen Waraahinta waxayna sheegeen in ay aad ugu faraxsan yihiin in Golaha Shacabka Soomaaliyeed ay ku matalaan Golaha Baarlamaanka Afrika.
Xillibaanada ka socda dalalka Bariga Afrika ayaa kulan gaar ah ku yeelan doona inta uu socdo kulanka waxaana shir guddoominaya Xildhibaan Cabdi Casiis C/lllaahi Maxamed oo ka mid ah shanta xubnood ee ka socda Golaha Shacabka Soomaaliyeed waxaana xillkaan ay Soomaaliya soo heysay sanadahii ugu dambeeyay.
kulanka ayaa waxaa uu socon doona labada isbuuc ee soo socda, iyado xidhibaanada ay ka doodi doonaan qodobo dhowr ah oo hor yaala.
Shirka maamul gobolleedyada ee Kismaayo ka socda oo maanta la soo gabagabeynayo
Tirada carruurta ciidamada AMISOM ay ku dishay Soomaaliya